देउवाप्रति प्रकाशमानको आक्रोश: पार्टी कार्यालय हुँदा हुँदै घरमा बैठक बसाउने? | Butwal Dainik
देउवाप्रति प्रकाशमानको आक्रोश: पार्टी कार्यालय हुँदा हुँदै घरमा बैठक बसाउने?
काठमाडौं–: नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवासमा पार्टीको बैठक राखिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पार्टी कार्यालय हुँदा हुँदै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सभापति देउवाको घरमा बोलाएको भन्दै सिंहले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति काठमाडौंले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले बुढानीलकण्ठ नदेखेको झैं गरेर सभापति देउवाले आफ्नै निवासमा आइतबार (हिजो) केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको टिप्पणी गरे। ‘पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पार्टी सभापतिको घरमा बस्छ। वर्किङ कमिटी कार्यालयमा राख्नुपर्‍यो नि भनेर हिजो मैले बोलेँ। भवनको के काम? बुढानीलकण्ठ हामीले नदेखेको हो र भन्या। उहाँको त्यहाँ घर बन्नुभन्दा अघि नै हामी बुढानीलकण्ठ भगवानको पूजा गर्न जान्थेउँ नि त,’ सिंहले भने।
नेता सिंहले सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा सम्पन्न भएका वडा तथा पालिका अधिवेशनहरु मान्य नहुने समेत बताए। सत्ताको दूरुपयोग गरेर पुलिसको घेरामा राखेर डडेलधुरामा अधिवेशन गरिएकाले त्यस्तो अधिवेशन मान्न नसकिने सिंहको भनाइ छ।
नेता सिंहले क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखिएको ठाउँमा पुरानै क्रियाशील सदस्यलाई मान्यता दिने भनेर भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वन गर्नुपर्ने पनि बताए।
नेता सिंहले विधि र नियम उलंघन गरेर पार्टी नेतृत्वले सधैं कार्यकर्तामाथि अन्याय गरेको टिप्पणी गरे। पार्टी नेतृत्वले अब महाधिवेशन सार्ने अवस्था भने नरहेको सिंहको भनाइ छ।